Intuit TurboTax na-eme ka IRS dị mma | Martech Zone
Intuit TurboTax na-eme ka IRS dị mma
Bọchị Sọnde, Machị 4, 2007 Bọchị Sọnde, Machị 4, 2007 Douglas Karr
Tọọ Otu… taa bụ ụbọchị ụtụ. Anaghị m atụ anya n'ezie ime ụtụ isi m, mana achọrọ m ka ha mezue oge buru ibu. Inwe azụmaahịa oge (nke na-efufu ego ugbu a) na-eme ka ịdebe ndekọ dị oke mkpa ma kpọọ ndekọ asị. Yabụ enwere m kabinet faịlụ nke m na-etinye ndetu, nnata, na ihe ndekọ mbanye n'ime. Mgbe ahụ, mgbe ụtụ isi na-abịa, m na-egwupụta folda niile ma jiri nlezianya hazie ihe niile na ihe omume enwere nyocha na ụzọ.
N’afọ 2005, ahapụrụ m azụmaahịa ahụ dị n’akụkụ n’ihi na ọ bụ nsogbu. Agbanyeghị, n'afọ a, ọrụ m abụrụla nke a na-achọ achọ karịa na higher mana nke kachasị elu, mana enweghị ego. Nke ahụ dị mma… ọ gbakọọ na ọ na-arụ ọrụ. M na-ahọpụtakarị nke mere na ụgbụ ya bụ na m tinyere ọtụtụ ihe na azụmaahịa m karịa nke m webatara. Ebumnuche m na-abụkarị imebi, mana enwere m akaụntụ bum na-etinye m n'okpuru.
Na ... M na-eme atụmatụ na izu ụka ime ụtụ isi mgbe ụmụaka na-aga ileta mama ha. Dika ochicho si di, nke ahu kagburu. Kụọ abụọ.
M wee banye na TurboTax ibudata ngwanrọ wee chee na m nwere nsogbu…. na peeji nke akauntu m enyela iwu 2006 TurboTax Home & Business Version. Mana ọ bụ maka Windows ma enwere m Mac. Kụọ atọ?
M banyere n'ime web version nke ngwanrọ na-eche ụdị ngwa m ga-enweta. Nwa, m nọ na nke ezigbo obi ụtọ. Ọ dị nnọọ ịtụnanya. Ojiji nke ngwanrọ ịntanetị zuru oke… n'akụkụ aka ekpe bụ nchịkọta na n'akụkụ aka nri bụ enyemaka ọzọ. N'ime etiti etiti, ngwa ahụ rụrụ ọrụ n'enweghị ntụpọ. Enwere m ike ịlaghachi azụ na azụ, gbafee ngalaba, wụli azụ… na enweghị nsogbu.
Mgbe mbụ m malitere, M na-agba ọsọ na Ndekota ebe m chere na m ga-achọ ibudata ngwanrọ ahụ. Enweghị mkpa. Ihe dị ka ọkara ịgafe ụtụ isi m, agbanyeghị, IE7 kpebiri iwepụ ihe (ọ bụghị ihe ịtụnanya). Enwere m ụjọ na m nwere ike tufuo ụfọdụ ozi mana mgbe m abanye na iji Firefox, ọ dịtụghị mgbe m furu efu. TurboTax na-echekwa ka ị na-aga.
Fọdụ nnukwu atụmatụ ndị ọzọ… M ka nwere ike ibubata ụtụ isi 2005 m iji bido mbido. Ọzọkwa, enwere m ike ibudata data W-2 m niile site na ADP na ngwa TurboTax. Edere m na kọmputa, ana m edeghachi nkwụghachi ahụ ozugbo, nweta ozi email mgbe ha dị njikere maka nkwado, ma ga-enweta ọzọ mgbe nkwụghachiri m - ụbọchị 9 echepụtara.
Na mkpokọta, Intuit mere ụbọchị m. Ngwa nke nwere ike ịpụta na ụtụ ụtụ anyị dị ezigbo ịtụnanya. Ọbụna Onye isi ala Bush kwuru, sị:
Koodu ụtụ isi bụ ọgbaghara dị mgbagwoju anya. Realize mara, ọ bụ otu nde peeji ogologo.
ekele, Intuit. Anọ m na-eji TurboTax ihe dị ka afọ 8 ugbu a ma echere m na Intuit nwere ike ịnwe ndị ahịa maka ndụ (ọ bụrụhaala na ha tufuo ndị ọkachamara na-ahụ maka ọrụ ha!) TurboTax na-eme IRS dị mma. M na-eche ma usoro ụtụ isi ga-akawanye mma ọ bụrụhaala na ha nwere ụdị onyinye a na-ewere ọgbaghara dị mgbagwoju anya ma hazie ya n'ime ngwa dị egwu dị otú a.
Maka ndị ahụ na-eche na ngwa desktọọpụ enweghị ike ịkwaga n'ịntanetị, naanị jiri ụtụ isi gị TurboTax Na ntaneti. Nanị ihe m na-akụda bụ na usoro ahụ niile bụ mgbe m chọpụtara na m mere obere afọ a karịa afọ gara aga. Ug. Na nwa m nwoke gbara afọ iri na asaa yabụ anaghịzị enweta kredit ụtụ $ 17k maka ya.
N'ihi ya, m na-ekwu…
Tekinoloti Rank WordPress Plugin 1.0.9 wepụtara
Adị m onye na-akwado TurboTax (mbipụta desktọọpụ) ruo ọtụtụ afọ ugbu a. Kedu otu mbipụta dị n'ịntanetị si eme ọtụtụ nloghachi ụtụ? Nke ahụ bụ, ị ga-akwụ ụgwọ maka nloghachi ụtụ isi ọ bụla?
Cheta afọ ole na ole gara aga mgbe Intuit jiri ntinye ngwaahịa kwụsị ọtụtụ nrụnye site na otu CD? Kwuru nke ọma na mpempe akwụkwọ, mana ọ kpasuru ezinụlọ niile (ndị di na nwunye) iwe na ha tụrụ anya na ha nwere ike ime ụtụ isi ha na kọmpụta ha. Olileanya na mbipute ịntanetị na-agbanwe na nke a.
Ka m gwa gị eziokwu, o doghị m anya! Naanị m (ekele) nwere otu nchegbu. Echeghị m na m ga-alaghachi na desktọọpụ mgbe m jiri ntanetị! Enweghị nwụnye, na enwere ike ịnweta data m niile site na ebe a! (Are nwere ike ịchekwa ụdị ụtụ isi gị niile site na PDF iji nwee ndekọ).
Enwere m ezigbo obi ụtọ ịgụ banyere ezigbo ahụmịhe gị na TurboTax afọ a. Daalụ maka ịbụ onye ahịa na-eguzosi ike n'ihe! M kesara ụfọdụ ndị na-emepụta anyị akwụkwọ ozi gị ebe m kwenyesiri ike na ha ga-enwe obi ụtọ kudos.
Ledo onwe gị,
Onye njikwa ahia, TurboTax
Daalụ maka ịhapụ ụdị edemede a ma enwere m obi ụtọ na ịkekọrịta ya!
Dịọkpa, ana m eji TurboTax Online kemgbe ihe dị ka afọ 2001. Ọ bụrụ na ị na-eji ya n'afọ ọzọ, ọ ga-adọpụta data site na afọ a banye na akaụntụ ahụ ka ị ghara ịlaghachi ma banyeghachi ihe. Ha debekwara oge ochie gị niile na ntanetị. Agaghị m eji ihe ọ bụla ọzọ.